Ihe oru iri na abuo n’izu ahia nke ndi oru ahia Martech Zone
Ihe oru iri na abuo n’ime izu ahia nke Social Media
Sunday, December 6, 2015 Sunday, December 6, 2015 Douglas Karr
Obere oge kwa ụbọchị? Di na nwunye ole na ole n’izu? Okwu nzuzu. Mgbasa mgbasa ozi na-achọ ịga n'ihu, mgbalị na-aga n'ihu maka ụlọ ọrụ iji ghọta n'ụzọ zuru oke ikike nke onye na-ajụ ase iji mee ka ndị na-ege ntị nwee ike ma wuo obodo. Lee anya na Ndepụta Nyocha Social Media na anyị ebipụtawo na mbụ ma ị ga-ahụ na ọ chọrọ mgbali siri ike, nhọrọ nke ngwa ọrụ, yana itinye ego na oge.
Ihe omuma ihe omuma a bu ihe m choro n’oge itinye aka n’oru iji mepee ihe omuma nke ndi mmadu. Isi ịdọ aka ná ntị - n'ezie, nzukọ ọ bụla dị iche na arụmọrụ ọ bụla edepụtara ma tinye n'ọrụ ga-arụ ọrụ maka iru ebumnuche azụmaahịa. N'ikwu ya, echere m na oge a na-anọchi anya ebe a bụ ihe ezi uche dị na ya karịa echiche nke ndị otu nwere ike ị nweta uru site na ọwa mmekọrịta site na itinye ego "nkeji iri na ise n'ụbọchị". Mark Smiciklas, Intersection na-agba izu
Oge Mgbalị Kwa Izu Kwa Maka Atụmatụ Mgbasa Ozi Dị Irè
ịde blọgụ - 7.5 awa iji mepụta ọdịnaya ị nwere ike ịkekọrịta site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nsogbu - 5 awa iji dozie nsogbu, dee ederede ndị a na-akwadoghị, nyocha, ma nye njikwa mmebi iji jikwaa aha.
mmelite - awa 4 iji biputere ederede, foto, na ikwu.
njikọ aka - 4 awa n’izu iji zaghachi, kwuru, na ajụjụ.
Research - 3 awa iji nweta ọdịnaya na mpụga.
na-ege ntị - Nkọwa nlekota oru 2.5 awa, hashtags, isiokwu, na ọchụchọ.
Mmezi - Ntanetị 2.5 na-agụ ndepụta, nzacha, na ịkekọrịta ọdịnaya.
Community - awa 2.5 nke ige ndị mmadụ ntị na nnweta.
Campaigns - 2.5 awa iji zụlite asọmpi na jikwaa ngwa nkwado.
Strategy - 2.5 awa nke kenkwucha atụmatụ na ideation.
Analytics - Ogologo oge 2.5 iji nyochaa akuko mgbasa ozi na arụmọrụ.
Planning - Otu awa n’izu iji melite kalenda ederede gị ma nye ọrụ.
Nke a bụ Mark infographic mara mma nke na-akụda ọrụ iri na abụọ a n'ime ọnụọgụ oge nke ọ na-ahụ ka ụlọ ọrụ na-emefu iji mezuo.
Tags: ịde blọgụinfographicnkwụsị n'okwuAkara Smiciklasnjikwa ahanchịkọta gbasara mmekọrịta ọha na ezemgbasa ozi mgbasa oziụlọ ọrụ mgbasa ozi ọha na ezeelekọta mmadụ media curationntinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ mgbasa ozi awaelekọta mmadụ media infographicmgbasa ozi mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozinhazi mgbasa ozi na-elekọta mmadụnnyocha mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa ozi ọha na ezeelekọta mmadụ media ọrụ izu
TelePrompter: Onye na-ahụ maka ekwentị gị n'ịntanetị
Dec 10, 2015 na 12:35 PM
Douglas, daalụ maka ịkekọrịta infographic ahụ na post gị - enwere ekele maka ya!